Etu aga - esi bulie vidiyo Youtube na chanel gị | Martech Zone
Anyị na-anọgide na-arụ ọrụ na njikarịcha ndu anyị maka ndị ahịa anyị. Mgbe anyị na-enyocha ma na-enye ndị ahịa anyị ihe na-ezighị ezi na ihe mere na ọ bụ ihe ọjọọ, ọ dị mkpa na anyị na-enyekwa nduzi na otú mezie okwu.
Mgbe anyị na-enyocha ndị ahịa anyị, ọ na - eju anyị anya oge niile maka mbọ dị ntakịrị e tinyere iji bulie ọnụnọ Youtube ha yana ozi metụtara ya na vidiyo ha buliri. Imirikiti na-ebugo vidiyo ahụ, setịpụ aha ya, ma pụọ. Youtube bu ihe nyocha nke abuo nke kachasi na azuma Google ma na - aja peeji Google Search Engine Result Pages. Imchọta vidiyo gị ga-eme ka vidiyo gị ọ bụla dị na nchọta dị mkpa.
Hazie YouTube Channel gị
Akpa, jide n'aka na ị na-agagharị na customization in YouTube Studio ma jiri atụmatụ niile hazie ọwa gị.
Okirikiri nhọrọ ukwuu - Hazie ọwa gị na-adọkpụ na vidiyo vidiyo gị maka ndị debanyere aha ha. Jide n'aka tinye akụkụ ndị egosipụtara - ọ bụrụ na ị nwere ụdị vidiyo dị iche iche, nke a bụ ebe dị mma iji tinye ndepụta ọkpụkpọ otu na vidiyo ọhụrụ gị na nke ọ bụla.
mbọn - Tinye ihe osise gị ọwa, Elezie gị logo, ted maka a gburugburu oyiyi ngosi. Tinye onyonyo banner nke opekata mpe 2048 x 1152 ma lezienụ anya ka esiri gosipụta onyonyo a na wepụta ọ bụla. YouTube na-ahapụ ka ị hụchalụ nke ọ bụla. Ọzọkwa, tinye akara ngosi vidiyo na vidiyo niile maka mmata aha. Buru n'uche na ị naghị etinye ọdịnaya na vidiyo ọ bụla nwere ike zoo n'azụ akara mmiri gị.
Basic Info - Nye nkọwa dị ukwuu banyere ọwa gị nke na-adọta ndị ọbịa ịlele ma denye aha na ọwa gị. Ozugbo ị nwetara ndị debanyere aha 100 na ọwa gị anọwo na ụbọchị 30, hazie URL gị na aha otutu maka ụzọ nke ọwa gị karịa igodo pụrụ iche nke YouTube na-enye. Nke kachasị mkpa, tinye njikọ na ozi gị nke na-eme ka ndị mmadụ laghachi na saịtị gị ma ọ bụ na ntanetị ndị ọzọ.
Tupu Pub Na-ekwusara
Ndụmọdụ ole na ole gbasara mmepụta vidiyo gị. Na mpụga nke ndekọ na edezi vidiyo ahụ, elegharala ihe vidiyo vidiyo ndị a anya tupu ị bipụta:
Audio - Ndi ị maara na ndị mmadụ ga-ahapụ a video maka ọdịyo mbipụta karịa video àgwà? Jide n'aka na ịdekọtara vidiyo gị site na iji akụrụngwa dị egwu iji weghara ụda na-enweghị mgbagha, ntụgharị, na mkpọtụ ụda.
Intro - Ntinye siri ike kwesịrị itinye ụda maka ihe kpatara ndị mmadụ ga-eji na-ele vidiyo gị. Ọtụtụ ndị na-ekiri ha na-ele sekọnd ole na ole wee pụọ. Gosiputa ika gi ma gwa ndi mmadu ihe ha ga amuta ma oburu na ha rapara.
Ndị ntipịa - Ọpụpụ siri ike nke nwere oku na-eme na ebe ị ga-aga dị oke mkpa iji mee ka onye na-ele gị mee ihe ọzọ. Aga m akwado URL na-aga, ma ọ bụ ọbụna adreesị ozi-e na akara ekwentị, na sekọnd ikpeazụ nke vidiyo gị. Jide n'aka na URL dị na vidiyo ahụ na URL anyị kọwara na usoro ndị dị n'okpuru.
Njikarị Youtube Video
Nke a bụ mmebi nke ihe anyị na-achọ mgbe anyị na-enyocha vidiyo Youtube nke onye ahịa:
Vidiyo vidiyo - Gị video ọwa kwesịrị inye a isiokwu-ọgaranya aha. Ka ọ dị ugbu a, otu ị si aha vidiyo gị bụ ihe kacha mkpa. Youtube na-eji aha vidiyo gị eme ihe maka isi ya na ibe ahụ na aha ya. Jiri okwu mbu mee ihe, wee ozi ụlọ ọrụ gị:
Etu esi ewepu Youtube Video gi | Martech
Details - Ozugbo i bulite vidiyo gị, ị ga-ahụ na enwere ọtụtụ, ọtụtụ nhọrọ maka ịkọwa ozi na vidiyo gị. Ọ bụrụ na ị na-adọta ndị na-ege ntị na mpaghara, ị nwere ike ịgbakwunye ọnọdụ na vidiyo gị. Dejupụta ihe niile ị nwere ike, ya niile na - enyere aka iji hụ na edepụtara vidiyo gị nke ọma ma chọta ya! Jide n'aka na ịhazi vidiyo gị na listi ọkpụkpọ yana.
tọmbneelụ - Ozugbo inyocha nọmba YouTube gị site na nọmba ekwentị, ị nwere ike ịhazi thumbnail vidiyo ọ bụla. Incrediblezọ dị egwu iji mee nke a bụ ijikọta aha gị na onyonyo vidiyo, lee ihe atụ site na Crawfordsville, Indiana Roofer anyị na-arụkọ ọrụ, Ọrụ ụlọ Cook:
URL Mbụ - Ọ bụrụ na mmadụ hụrụ vidiyo gị ma ọ masịrị ya, kedu ka ha ga-esi laghachi na saịtị gị iji soro gị? Na mpaghara nkọwa gị, ihe mbụ ị ga-eme bụ itinye njikọ laghachi na peeji ọdịda nke ịchọrọ ka ndị mmadụ gaa. Debe URL ahụ ka ọ bụrụ nke a ga-ahụ ya na mpaghara nkọwa ejiri Youtube mee.
Description - Etinyela otu akara ma ọ bụ abụọ, dee nkọwa siri ike nke vidiyo gị. Ọtụtụ vidiyo na-aga nke ọma na-agụnye dum video transcription n'ozuzu ya. Inwe nkwado ọdịnaya na ibe ọ bụla dị mkpa… na Youtube ọ dị oke mkpa.
Captions - Ọtụtụ mmadụ na - ele vidiyo na - ada ụda. Zipu vidiyo gi ka edeputara ya ka ndi mmadu we guo ya na vidiyo. Ga mkpa n'ụzọ kwesịrị ekwesị ka asụsụ nke gị video na transcription, mgbe ahụ, ị ​​nwere ike bulite ihe SRT faịlụ nke ahụ kwekọrọ na oge vidiyo.
Tags - Jiri mkpado rụọ ọrụ nke ọma iji depụta isiokwu ndị ịchọrọ ka ndị mmadụ chọta vidiyo gị. Kpido vidiyo gị bụ nnukwu ụzọ iji bulie ọhụhụ ya na nyocha Youtube dị mkpa.
Comments - Vidio nwere nnukwu ọrụ ikwu okwu na-agbadata ịdị elu karịa vidiyo na enweghị nkwupụta. Kesara ndi otu na ndi oru gi vidiyo gi ma gbaa ha ume ka ha tinye aka na isi okwu na vidiyo a.
Echiche - not mebeghị! Na-akwalite vidiyo gị ebe niile… na ntanetị, na ibe weebụ, na netwọk mmekọrịta, na ọbụlagodi mbipụta akụkọ. Ihe nlere ka vidiyo gị na - enweta, ka ọ ga - ewu ewu. Ndị mmadụ na-elekarị vidiyo na echiche ma na-egwu ndị nwere obere echiche.
Video Sitemaps - Ọ bụrụ na vidiyo bụ akụkụ dị mkpa nke saịtị gị, ị nwekwara ike mepụta vidiyo saịtị mgbe ị na-ebipụta ha na weebụsaịtị ma ọ bụ blọọgụ gị. Ihe odide vidiyo gunyere web peeji nke tinyere vidiyo, URL na ndị egwuregwu maka vidiyo, ma ọ bụ URL nke ọdịnaya vidiyo na-akwadoghị na saịtị gị. The sitemap nwere aha, nkọwa, play peeji nke URL, thumbnail URL, na raw video faịlụ ebe, na / ma ọ bụ ihe ọkpụkpọ URL.
Ngosipụta: Ana m eji njikọ njikọ m na Rev, nnukwu ọrụ maka ntụgharị vidiyo na ntinye ederede.
Tags: mmechi okwumechie ihe nchịkọtagoogle webmastergoogle webmaster ngwaọrụebuli gị youtube videoebuli youtubesrt faịlụvideo emechi captionnjikarịcha vidiyovidiyovideo Sitemapvideo transcriptionvidiyo xml saịtịNyocha YouTube chanelnjikarịcha youtubeyoutube videonjikarịcha vidiyo vidiyo